China agaro oligosaccharide ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta | HQG
Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide nwere ụfọdụ pụrụ iche ndu eme, dị ka mgbochi ọxịdashọn, mgbochi mbufụt, mgbochi nje na mgbochi nke colitis, wdg Product na amịpụtara na-esichara site na nkà mmụta sayensị nhazi technology, àgwà bụ n'ụzọ zuru ezu kwekọrọ na mba. na ụkpụrụ EU. Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide bụ ụdị oligose na ogo nke polymerization (DP) nke 2 ~ 12 mgbe hydrolysis, nke nwere obere viscosity, nnukwu solubility, ebe dị elu na nnukwu ọrụ.
Dị ka ụdị polysaccharide mmiri, agar nkịtị nwere nnukwu viscosity na obere mmiri solubility, ọ naghị adị mfe ịmịnye ya, ya mere ọ nwere oke njedebe na ngwa. Ma agaro-oligosaccharise site na mbibi, ọ nwere ezigbo solubility na mmiri, na-enye aka maka ahụ mmadụ ka ọ banye, ọ bụghị naanị na njirimara zuru oke nke oligosaccharides na-arụ ọrụ, nwekwara ọtụtụ njirimara anụ ahụ nke enweghị ike dochie anya oligosaccharide, dịka ike siri ike -cancer, mgbochi-ọxịdashọn, mgbochi mkpali ọrụ, ire ere eguzogide ọgwụ na-eguzogide ọgwụ starch ịka nká, ọ bụ otu n'ime ndị kasị mmepe nwere nke oligosaccharides.
1. Mmetụta nke probiotics nsia
Fujian Global Ocean Agaro-oligosaccharides nwere ike ịba ụba bifidobacterium na lactobacillus, na-ebelata oge mmegharị nke nje bara uru, na-akwalite mmụba mmụba ngwa ngwa. Ọ na-eguzogide mgbaze site na enzymes nke eriri afọ. Mgbe 24H nke ọgwụgwọ site na enzymes nke eriri afọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oligosaccharides nile amylolytic enzyme adịghị emetụta. Ọ gaghị enwe ike ịgbari ma ọ bụ tinye obi na eriri afọ nke onye ọbịa ahụ ma nwee ike iru nnukwu eriri afọ ahụ.
2. Moisturize na-acha ọcha
Fujian Global Ocean oligosaccharides gosipụtara ezigbo hygroscopicity ma nwee mmetụta ụfọdụ na-edozi ahụ.
Site na nrụpụta ọrụ ya pụrụ iche na igbochi ọrụ nke monophenolase na diphenolase nke tyrosinase, ọ nwere ike belata nhazi melanin na akpụkpọ ahụ ma nwee ezigbo ọrụ mgbochi. Ya mere, enwere ike itinye ya na ihe ịchọ mma dị ka ihe na-acha ọcha.
3.Anti-tumo na dịghịzi nkwalite
Ọ na - egbochi mmepụta mkpụrụ ndụ nke kansa site na igbochi ọrụ nke mkpụrụ ndụ tumo dị ka ọrịa afọ, ọrịa kansa imeju na ọrịa eriri afo, yana igbochi mmepụta nke prostagladin PGE2 na iwepụta ihe nzuzo nke ihe necrosis tumo TNF-α, si otú a na-egbochi mmepụta nke mkpụrụ ndụ cancer.
4. Mmetụta Bacteriostatic
Dịka ezigbo nchekwa nchekwa sitere n'okike, ọ nwere mmetụta bacteriostatic siri ike ma nwee ike belata nrụpụta nke ogige nje na-emerụ ahụ mgbe uche ya ruru 3.11%. Ọ bụ ihe nchekwa nwere agrobiose nke enwere ike iji mee ka nri na ihe ọ freshụverageụ dị ọhụrụ ma gbochie mgbanwe agba ya, nrụrụ aka na oxidation.
5. Mmetụta mgbochi mkpali
Nkwadebe ọnụ nwere ike igbochi ma gwọọ ọrịa ogbu na nkwonkwo na-adịghị ala ala, na-enweghị cytotoxicity. Ọ na - egbochi mmepụta nke NO (oke nitric oxide na-akpata ọrịa ogbu na nkwonkwo), nke enwere ike iji gbochie ma gwọọ ọrịa na-adịghị ala ala dịka ọrịa ogbu na nkwonkwo.
1. Medicallọ ọgwụ
Anticancer ọgwụ: Eji Enzymatic hydrolysis nweta oligosaccharide. Mgbe ụbọchị 15 nke nyocha òké, achọpụtara na ọnụọgụ mgbochi nke 64mg / kg oligosaccharide na mkpụrụ ndụ kansa bụ 48.7%.
Ọgwụ nchebe imeju: Molekul molecule agaro-oligosaccharide (ML) nwere ike ichedo ọrụ nke SOD na GSH-PX, ma nwee ezigbo nchekwa na mmerụ imeju.
Ọgwụ Cardiovascular: Agaro-oligosaccharide nwere mmetụta dị ịrịba ama na mgbochi nke angiogenesis, nke kachasị na-akpata site na ịkwalite apoptosis nke mkpụrụ ndụ eriri afọ nke mkpụrụ ndụ na igbochi mkpụrụ ndụ sel na S phase.
Ọgwụ ndị na-alụ ọgụ: Mgbochi na ọgwụgwọ nke ọrịa na-adịghị ala ala dị ka ọrịa ogbu na nkwonkwo.
2. Ahụ ike
Ihe ndị na-enye ara ara: Agaro-oligosaccharide adịghị agbari akụkụ eriri afọ nke eriri afọ, mana ọ nwere ike iji aka ya kpalite uto nke bifidobacterium na lactobacillus dị ka nje abụọ ahụ bara uru na akụkụ eriri afọ, ma gbochie uto nke nje ndị na-emerụ ahụ dị ka enterococcus, si otú a na-emeziwanye ahụike nke onye ọbịa. Ọ bụ ụdị prebiotics ọhụrụ. Ọganihu nke na-akwalite mmetụta nke agar-oligosaccharides na probiotics dị mma karịa nke pectin-oligosaccharides.
Nchekwa nri: Preservatives
Agar-oligosaccharide bụ ụdị nke nchekwa nchekwa sitere n'okike, nke nwere ike ime ka nri na ihe ọ freshụ freshụ dị ọhụrụ ma gbochie nke ọma mgbanwe agba ya, nrụrụ aka na oxidation. Na-ejuputa ihe: Agar-oligosaccharides nwere ike iji dị ka ndị na-ekpo ọkụ na ndị na-achụsasị ya na nnukwu uto n’ihi na nje bacteria adịghị emebi ha ma nwee ihe pụrụ iche nke oligosaccharides ndị ọzọ nwere ike iji tụnyere.
3. Nri arụ ọrụ
Onu ego agbakwunyere bu 0.05% ~ 10% nke mkpokọta nke nri. Dabere na ule nke ọdịnala, ọgụ, nkwụsi ike ọrịa, ogo uto na ọnụọgụ azụ nke azụ dị ka tilapia, oporo dị ka South American oporo oporo, azụ azụ na nshịkọ ejirila nke ọma ma e jiri ya tụnyere otu njikwa. Agaro-oligosaccharide bụ ezigbo ihe oriri na-eri nri.
4. Ihe ntecha
Ọ na-abịa site na ahịhịa mmiri dị ọcha, nke na-adịghị egbu egbu na nchekwa iji. O kwesịrị ka ejikọta ya na ihe ndị ọzọ dị ka mgbakwunye ịchọ mma ọhụrụ. Ọzọkwa, oligosaccharide bụ shuga na-anọpụ iche, na-enweghị nnukwu ọnụ ọgụgụ hydroxy dị iche iche na ngalaba nhazi ya, ma nwee ike jikọta ya na ọtụtụ mmiri molekul iji mepụta njikọ hydrogen. Ya mere, oligosaccharide nwere ezigbo hygroscopicity. Site na igbochi mmeghachi omume nke oxydation nke tyrosinase, belata nhazi nke melanin na akpụkpọ ahụ ma mee ka akpụkpọ ahụ dị ọcha.
Index nke Physicochemical
G / cm ²
Ogo nke polymerization
Mara: viscosity oke bụ 1.5% ngwọta n'okpuru 100 ℃.
Nke gara aga: Ngwa ngwa soluble agar
Osote: Ọkara Carrageenan nụchara anụcha